China 405w Monocrystalline Half Cell ဆိုလာပြား ထုတ်လုပ်သူများ နှင့် ထုတ်လုပ်သူများ - Rixing Electronics
ကျွန်ုပ်တို့သည် 25 နှစ်အာမခံဖြင့် 405w monocrystalline half cell ဆိုလာပြား 2021 အရည်အသွေးမြင့် TUV CE UL ကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ 158 half cell high watt သည် သင့်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥရောပနှင့် တောင်အမေရိကစျေးကွက်အများစုကို လွှမ်းခြုံထားသည့် ဆိုလာပြားအတွက် 15 နှစ်ကြာ လုံးလုံးလျားလျား မြှုပ်နှံထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တရုတ်တွင် သင်၏ ရေရှည်လက်တွဲဖော်ဖြစ်လာရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
ဤ 405w Monocrystalline တစ်ဝက်ဆဲလ်ဆိုလာပြား သည် UL TUV CE IINMETRO ဖြင့် နောက်ဆုံးထွက်ရောင်းအားကောင်းသည့် အရည်အသွေးမြင့်ဖြစ်ပြီး 25 နှစ် အာမခံပေးထားသည်။ အထွက်ပါဝါမြင့်မားပြီး အရိပ်များအောက်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပါဝါထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥရောပနှင့် တောင်ပိုင်းဒေသအများစုကို လွှမ်းခြုံထားသည့် ဆိုလာပြားကို 15 နှစ်ကြာ မြှုပ်နှံထားသည်။ အမေရိကန်စျေးကွက်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တရုတ်တွင် သင်၏ရေရှည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်လာရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
Module အမျိုးအစား QJM380-72 QJM385-72 QJM390-72 QJM395-72 QJM400-72 QJM405-72
ပါဝါအထွက် Pmax Wp 380 385 390 395 400 405
Pmax တွင် ဗို့အား V mpp V 40.5 40.7 40.9 41.1 41.3 41.5
Pmax တွင် လက်ရှိ စစပါခင်ဗျာ။ V 9.39 9.46 9.54 9.61 9.69 9.76
အဖွင့်-ဆားကစ်ဗို့အား Voc A 49.41 49.66 49.9 50.14 50.39 50.63
တိုတောင်းသောလျှပ်စီးကြောင်း Isc A 9.96 10.02 10.1 10.18 10.26 10.34
Module E ciency Eff % 19.16 19.42 19.67 19.92 20.17 20.42
ဆိုလာဆဲလ် (အရေအတွက်/ပစ္စည်း/အတိုင်းအတာ)၊ 72(6*12)၊ monocrystalline၊ 158.75*158.75mm
ကေဘယ်လ်များနှင့် ပလပ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ 900mm၊ 4mm² နှင့် MC4 နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မော်ဂျူးအတိုင်းအတာများ (L/W/H) 1979*1002*40 mm
Module အလေးချိန် 21.6 ကီလိုဂရမ်
1.1500V စနစ်ဗို့အား ဒီဇိုင်း 1000V စနစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက BOS ကုန်ကျစရိတ် အလွန်သက်သာသည်။
2. ပိုမိုတူညီသောလက်ရှိစုဆောင်းနိုင်စွမ်း၊ module အတွင်းဘက်ထရီ၏လက်ရှိအပူဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချပါ။ လှပသောအသွင်အပြင်၊ အမိုးတပ်ဆင်ရန်ပိုမိုသင့်လျော်သည်။
3. 405w monocrystalline ဆိုလာပြားကို သင့်လိုအပ်ချက်များအတိုင်း စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
QJ သည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး 158mm ဆီလီကွန် wafers များကို multi-busbar နှင့် half-cut cell နည်းပညာများဖြင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် QJ 405w Monocrystalline တစ်ဝက်ဆဲလ်ဆိုလာပြား သည် ပေါင်းစပ်ဖန်တီးမှုနည်းပညာကို ထိထိရောက်ရောက်နှင့် အလွန်အမင်း မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် module ထိရောက်မှုနှင့် ပါဝါထွက်ရှိမှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ 405w Monocrystalline Half Cell ဆိုလာပြားတွင် TUV(EU), CE, ETL(USA), INMETRO(BR), FIDE(MX), CQC(CN), KS(KR)၊ISO အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ပါရှိပါသည်။
hot Tags:: 405w Monocrystalline တစ်ဝက်ဆဲလ်ဆိုလာပြား၊ လက်ကား၊ ဝယ်၊ စိတ်ကြိုက်၊ အစုလိုက်၊ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ စျေးနှုန်းသက်သာ၊ အသစ်ဆုံး၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ တာရှည်ခံ၊ ထိရောက်မှု၊ သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်၊ Off Grid၊ On Grid၊ TUV၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ စက်ရုံ၊ စတော့ရှယ်ယာ၊ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ တရုတ်တွင်ထုတ်လုပ်သည်၊ စျေးနှုန်းစာရင်း၊ CE၊ 25 နှစ်အာမခံ